သတင်း - IME Holdings Group
IME Group မှဝန်ထမ်းများ၏ ၂ဝ၂ဝ ခုနှစ်ပတ်လည်ခရီးစဉ်အား(၂၉-ဝ၂-၂ဝ၂ဝ)နေ့မှ (ဝ၂-ဝ၃-၂ဝ၂ဝ) နေ့အထိ ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ (ညောင်ရွေ-ရွာငံ-အင်းလေး-ကလော) ဒေသများသို့ နှစ်ညအိပ်-သုံးရက် သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်။
IME construction သည် ၂၀၁၉၊ စက်တင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့တွင် ၄ ထပ်ဆောင်အမြင့်ရှိ CISM အဆောက်အအုံအား ဆောက် လုပ်ရန် Client၏ ဖိတ်ခေါ်အတိုင်ပင်ခံခြင်းကို ခံရ ပြီး IME Construction မှ ၂၀၁၉၊အောက်တိုင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့တွင် ပါ၀င်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါသည်။
IME construction သည် Network International School ပရောဂျက်ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် တင်ဒါ ၂၀၁၈၊ ဩဂုတ်လ (၁၀) ရက်နေ့တွင် ပါ၀င်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါသည်။ တင်ဒါ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ချက်များအားလုံးပြီးစီး နောက် Client နှင့် ၂၀၁၈၊ နို၀င်ဘာလ
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော်တာယာထုတ်လုပ်သူ Triangle Tyre Co., Ltd. ဟာ အရည်အသွေးမြင့်မားသော Triangle အမှတ်တံဆိပ်တာယာများကိုထုတ်လုပ်လျက်ရှိပြီး ကမ္ဘာအနှံ့နိုင်ငံပေါင်းများစွာကိုဖြန့်ချိရောင်းချပေးနေပါတယ်။
IME Construction မှ ပြုလုပ်သည့် The Leaf စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ပြီးစီးမှုအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားအား The Leaf Residence and Tower ၏ အဆောက်အအုံဧရိယာအတွင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
IME Group of Companies မိသားစု၏ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်ပွဲအား ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၈)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ဉက္ကလာပမြို့နယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သုမ္မိတာ (၁)လမ်းရှိ ‘စတုဘုမ္မိကမဂ္ဂင်ရိပ်သာ’
ဝန်ထမ်းများ၏ စေ့စပ်ညှိနှိင်းမှုနှင့် စိတ်ကျေနပ်မှု များထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ IME Holdings အနေဖြင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်ခြင်းစစ်တမ်းလှုပ်ရှားမူအား (၈-၄-၂ဝ၁၉)မှ (၁ဝ-၄-၂ဝ၁၉) ထိ (၃)ရက် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
IME Group of Companies ၏ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုနှစ် Staff Annual Trip အား (၁ဝ-၂-၂ဝ၁၉)မှ (၁၂-၂-၂ဝ၁၉) နေ့ထိ (၂)ညအိပ် (၃)ရက်ခရီးစဉ်အဖြစ် ငွေဆောင်ကမ်းခြေသို့ ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဝန်ထမ်းများ အားလုံး ပျော်ရွှင်စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့်
IME Group of Companies မှ (၁၉.၀၁.၂၀၁၉) ရက်နေ့ တွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖျာပုံခရိုင်၊ အမာမြို့နယ်၊ ဒေးဒလူကျေးရွာအုပ်စု၊ ချောင်းဝကျေးရွာ၌ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော မီးလောင်မှုကြောင့် အခက်အခဲများစွာရှိနေသည့်
ကုမ္ပဏီ၏ အုပ်ချုပ်မှုနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်နှင့် မလိုလားအပ်သော ပြဿနာ များကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများအား ဒေါက်တာတင်လတ် ဉီးစီးသော
IME Group of Companies မိသားစု၏ တတိယအကြိမ်မြောက် စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်ပွဲအား ၂၀၁၈-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ(၂၀)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ဉက္ကလာပမြို့နယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သုမိ္မတာ(၁)လမ်းရှိ
IME Group of Companies မှ 9-8-2018 ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဆိပ်ခွန်မြို့နယ်၊ တည်သီးတောကျေးရွာရှိ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ (ကိုယ်ထူကိုယ်ထ) တွင် လိုအပ်လျှက်ရှိနေသည့်
IME Group of Companies မှ ၃၀.၀၁.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ကလေးဆေးရုံကြီး (HALPIN) တွင် တက်ရောက်ကုသနေသည့် ရောဂါဝေဒနာရှင် ကလေးလူနာအမျိုးမျိုးတို့ အတွက် လိုအပ်နေသော
IME Group of Companies မိသားစု၏ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာပွဲအား နိုဝင်ဘာ(၂)ရက်နေ့၌ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ (၇)အနောက်ရပ်ကွက်၊ ဧရာဝဏ်လမ်းပေါ်ရှိ “ရွှေနံ့သာ”
IME Holdings Group ၏ လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်သော IME International Co.,Ltd. မုံရွာရုံးခွဲကို အကွက်အမှတ်(၆၈၇)၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊မြို့ဝင်ရပ်၊မုံရွာမြို့၊စစ်ကိုင်းတိုင်ဒေသကြီးတွင် ၂.၇.၂၀၁၇ (တနင်္ဂနွေနေ့) က ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ မုံရွာရုံးခွဲတွင် IME International Co.,Ltd . မှ တရားဝင်တင်သွင်းဖြန့်ချိလျက်ရှိသော
IME Holdings မိသားစုဝင် IME International Co.,Ltd ရဲ့ မကွေးရုံးခွဲဖွင့်ပွဲကို ၁၀.၀၆.၂၀၁၇ (စနေနေ့) မှာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ဖွင့်ပွဲတွင် IME International မှ တင်သွင်းရောင်းချသော စွမ်းရည်မြင့် YTO အမှတ်တံဆိပ် ထွန်စက်များ အကြောင်း ရှင်းလင်း
၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် IME Holdings Group မှ Nanyang Polytechnic Myanmar Culture Show တွင် Platinum Sponsor အဖြစ် စင်ကာပူဒေါ်လာ (၅ဝဝဝ) ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ဤသို့လှူဒါန်းသည့်ရည်ရွယ်ချက်မှာ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ပညာသင်ကြားနေသည့်
ကျွန်ုပ်တို့၏ IME Construction ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ISO အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (ISO 9001: 2008) ကို ရရှိခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၇)နေ့တွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း
IME Property Company Limited မှ တည်ဆောက်ရောင်းချလျက်ရှိသော The Leaf Residence Condominium များအား ဝယ်ယူအားပေးသော Customers များကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သည့် အခမ်းအနားကို Nov(6)ရက်နေ့က Yangon Novotel Hotael
IME Holdings Group of Companies မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ပတ်တန်းကျေးရွာ အုပ်စု၊ စံပြကွက်သစ် ကလေးသူငယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်မြှင့်တင်ရေးဂေဟာသို့ (24-09-2016)
IME Holdings Group ၏ အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် IME Property Co., Ltd. သည် ၎င်းတို့၏ လူနေ အိမ်ယာ ကွန်ဒိုမီနီယံ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ပွဲအား ရန်ကုန်မြို့ Novotel Hotel ၌ စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
IME Holdings Group ၏ အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် IME International Co., Ltd. သည် USA No. 1 အမှတ်တံဆိပ် ဖြစ်သည့် Good Year OTR (Off-The-Road)တာယာ၏ တင်ဒါနှင့်ပတ်သက်လုပ်ငန်းများ၊